Hosea 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Israelfo fii Onyankopɔn akyi; ɔtwee wɔn aso (1-13)
Yehowa bɛsan abɛyɛ wɔn kunu (14-23)
“Wobɛfrɛ me ‘Me kunu’” (16)
2 “Monka nkyerɛ mo nua mmarima sɛ, ‘Me man!’*+ Na monka nkyerɛ mo nua mmea sɛ, ‘O ɔbea a wɔahu no mmɔbɔ!’*+ 2 Mommɔ mo maame sobo; mommɔ no sobo,Efisɛ ɔnyɛ me yere,+ na menyɛ ne kunu. Onyi n’aguamammɔ* no mfi ne ho,Na onyi n’awaresɛe no mfi ne nufu ntam, 3 Anyɛ saa a, mɛpa ne ho ama wada adagyaw te sɛ ɛda a wɔwoo no no.Mɛma wayɛ sɛ sare so,Na mɛma wayɛ sɛ asaase a ɛso awo,Na mɛma osukɔm akum no. 4 Na merenhu ne mma mmɔbɔ,Efisɛ wɔyɛ aguaman mma. 5 Wɔn maame abɔ aguaman.*+ Nea onyinsɛn wɔn no ayɛ aniwude,+ efisɛ ɔkae sɛ,‘Mɛkɔ akodi me mpenafo akyi;+Wɔn na wɔma me m’aduan ne me nsu,Ne me kuntu ne me ntama ne me ngo ne me nsã.’ 6 Enti mede nsɔe begye ban asiw wo kwan;Na mede abo bɛto ɔfasu asiw no kwan,Sɛnea ɛbɛyɛ a ɔrenhu kwan. 7 Obetiw ne mpenafo, nanso ɔrento wɔn;+Ɔbɛhwehwɛ wɔn, nanso ɔrenhu wɔn. Na ɔbɛka sɛ, ‘Mɛsan akɔ me kunu a odi kan no nkyɛn,+Efisɛ saa bere no, na eye ma me sen nnɛ.’+ 8 Wanhu sɛ me na memaa no hwiit*+ ne bobesa foforo ne ngo,Na wanhu sɛ me na memaa no dwetɛ pii,Ɛne sika kɔkɔɔ a wɔde som Baal no.+ 9 ‘Ɛno nti, mɛsan aba, na mabegye me hwiit* afi ne nsam twabere mu,Na megye me bobesa foforo afi ne nsam bere a wɔtetew bobe,+Na meyi me kuntu ne me ntama a ɔde kata n’adagyaw so no afi ne ho. 10 Afei mɛma ne ho ada so wɔ ne mpenafo anim,Na ɔbarima biara nni hɔ a obegye no afi me nsam.+ 11 Mɛma n’anigye nyinaa to atwa, N’afahyɛ ahorow,+ n’asram foforo, ne home nna, ne ne nnapɔnna nyinaa, ɛto betwa. 12 Na mɛsɛe ne bobe nnua ne ne borɔdɔma nnua. Saa nnua no, ɔkaa ho asɛm sɛ: “Ɛyɛ m’akatua; me mpenafo na ɛde maa me.”Mɛdan no kwae,Na wuram mmoa awe. 13 Na mɛma wabu nna a ɔbɔɔ afɔre maa Baal ahoni no ho akontaa,+Nna a ɔde nkawa ne agude siesiee ne ho, na okodii ne mpenafo akyi no.Na me de, ne werɛ fii me,’+ Yehowa asɛm ni. 14 ‘Ɛno nti, mɛkorɔkorɔ no,Mede no bɛkɔ sare so,Na mɛkasa ama ne koma atɔ ne yam. 15 Efi saa bere no rekɔ no, mɛsan de ne bobefuw* ama no,+Na mɛma wafa Akor Bon no mu*+ akɔ anidaso mu;Obegye so wɔ hɔ sɛnea ɔyɛe ne mmabaaberem no,Te sɛ bere a ofi Egypt asaase so bae no.’+ 16 Nea Yehowa aka ni: ‘Saa da no, Wobɛfrɛ me “Me kunu,”na woremfrɛ me “Me wura”* bio.’ 17 ‘Meyi Baal ahoni no din afi n’anom,+ Na ɔrenkae wɔn din bio.*+ 18 Saa da no, me ne wuram mmoa bɛyɛ apam ama wɔn,+Na me ne wim nnomaa, ne mmoa a wɔwea fam bɛyɛ apam ama wɔn;+Meyi agyan ne sekan ne akodi afi asaase no so,+Na mɛma wɔatena hɔ dwoodwoo.+ 19 Megye wo aware,* na woayɛ me dea daa;Meka ntam sɛ me ne wo bɛtena trenee ne atɛntrenee mu,Na mada ɔdɔ a enni huammɔ ne mmɔborɔhunu adi akyerɛ wo.+ 20 Meka ntam sɛ meremfi w’akyi da,*Na wubehu sɛnea me, Yehowa, mete.’+ 21 Yehowa asɛm ni: ‘Saa da no, megye so;Megye ɔsoro so,Na ɔsoro nso agye asaase so;+ 22 Na asaase begye hwiit* ne bobesa foforo ne ngo so;Na eyinom nso begye Yesreel* so.+ 23 Na medua no sɛ aba wɔ asaase mu afa,+Na nea wɔanhu no mmɔbɔ no, mehu no mmɔbɔ,*Na mɛka akyerɛ wɔn a wɔnyɛ me man* no sɛ: “Woyɛ me man,”+ Na wɔbɛka sɛ: “Woyɛ me Nyankopɔn.”’”+
^ Hwɛ Ho 1:9 ase hɔ asɛm no.
^ Hwɛ Ho 1:6 ase hɔ asɛm no.
^ Anaa “ne brabɔne.”
^ Anaa “abu brabɔne.”
^ Anaa “Me Baal.”
^ Anaa “ɔremfa wɔn din nkae wɔn bio.”
^ Anaa “Mesi wo asiwa.”
^ Anaa “me ne wo bɛtena nokwaredi mu.”
^ Ɛkyerɛ, “Onyankopɔn Bedua Aba.”